6 Ruambanyeredzi (astrology)
Chirevo che: ChindeyaEdit
Iro shoko rekuti chindeya rino batanidzirwa nemafundo akasiyana, senhoroondo, ruambanyeredzi (astrology), sainzi neruambangano (mythology). Pachibviswa chindeya chedu chatigeremo (Rinopasi) pane zvindeya shanu zveMutandiro weMushana zvinoonekwa neziso pacharo (ziso risina kupfeka / risina maikiros'kopu). Nekudaro zvindeya izvozvo zvakambo kudzwa zvikanamatwa munhoroondo, kunyanya kuVarungu (Magiriki neMaroma pakazhinji).
(ii) kana morekiu (molecule) negiravhiti zvakaringana kusvika pachimiro chakaita sedenderedzwa
Muchiverenga rangarirai kuti mamwe mazita ezvindeya muChishona haasati akuzivikwa, ndosaka pachishandiswa mazita eChirungu. Zvakadaro, mazita ezvindeya muChishona anowanikwa mutafura iri pazasi:
Nyamatsatse (Chirungu: Mercury)
Zvindeya zvidiki muChishonaEdit
Ruambangano (Chirungu: mythology) inyaya dzisiri chokwadi, kana nyaya dzekare kare kunyanya nyaya dzaitendwa kudhara dzisisa tendwe mazuvano. Mundoto dzeMashona yezve kusikwa kwezvinhu, Hweva ari apakati, iye nemamwe mazita ake ese.
Zivai kuti Mwari izita reVashona kwete remaKristo, uye rinoshandiswa wo nevaya Vashona vanonamata chitendero chezvinyakare. Izita raivepo kubva munguva yeUmambo hweDzimbadzamabwe uye, munguva yeUmambo hweMutapa futi. Makristo vakauya ndokubva vangori shandisa wo muBhaibheri nekuti ndiro raizivikwa neMashona.
Chayina nedzimwe nyika dzekumabvazuva kweEzhiya munhoroondo pasi pechimiro e tsika dzeChichayina (senge Japani, Koriya neVhiyetinamu) vanoshandisa zita rekutumidza mazita kubva pazvinhu zvishanu zveChichayina: mvura (Nyamatsatse), simbi (Hweva), moto (Mrongazuva), huni (Vheneke) uye pasi (Chiremera).
Makwangwani ezvichadenga zvemu Ruambanyeredzi, asi Zuva (sol), Mwedzi (luna) hazvisi zvindeya. Uye, Rinopasi (terra) hirizimo muAs'troroji
MuRuambanyeredzi (Chirungu: astrology) zvindeya zvinoshandiswa kumirira zvinhu zvakasiyana muhupenyu hwemunhu. Zvimwe zvinhu zvechadenga zvinosanganiswa muRuambanyeredzi zvisiri zvindeya iZuva ne Mwedzi, uye Rinopasi rinobviswa.
Ruambanyeredzi inotanga nezuva yoenda kuMwedzi yozo tanga kutarisa nekutsanangura zvindeya nesimba zvazvinazvo pamunhu nehunhu hwemunhu. Chindeya chimwe nechimwe chine chiratidzo (chirungu:sign; saini) chinobatanidzwa nacho (zvindeya zvinotonga masaini).
Nyamatsatse inotonga maratidzo maviri Mhandara kana Vhego (Virgo) neMamanga kana Jemenai; Jemano (Gemeni). Muruambanyeredzi nyamatsatse inomirira njere (kana pfungwa; kuva nemusoro'). Saka inoratidza matauriro anoita munhu, mafungiro emunhu wacho nezvekuti anofunda sei uye zvekuti zvifundo zvinopinda sei muuropi. Nyamatsatse inotaridza magadziriro nemasikiro atinoita zvinhu pachedu, nemafungidziro atinoita. Zvinhu zvakaita sekuti, tinonyora pasi tichifunga here, kana kuti, tinotaura kana tichifunga, uye kana kuti hatifunge zvakakwana kana kuti tinofungisisa, zvese zvinotaridzwa naNyamatsatse.
Hweva muruambanyeredzi anotonga nyenyedzi kana zviratidzo zviviri, Handira kana Torisi (Tauras) ne Pima kana Ribhura (Libra). Muruambanyeredzi Hweva anomirira runako, tunonaka, nekushamwaridzana. Hweva muchati (chart) yemunhu inoratidza tunhu tunofarirwa nemunhu iyeye nezvinhu zvaanenge achifunga kuti zvakanaka, uye zvinhu zvavanokwezva, uye mapindiro avanoita murudo. Hweva ndevezvemufaro, kuda munhu nekudiwa, kukwezva nekukwezviva, kuroora, ushamwari nekupfava kwemoyo. Uyezve anomirira mari, nekubatanidzwa kwevanhu kana zvinhu / kushanda nevamwe.
Murongazuva muruambanyeredzi anotonga nyenyedzi kana ratidzo inonzi Hondowe kana Erisi (Aries). Anomirira chikamu chedu chinoita senge mhuka, hasha dzedu, kuda kwedu kwekukwikwidza nesimba redu rekuita zvinhu tichipedza. Uye shungu, moto urimoyo nekusatya. Madiro anoita munhu chinzvimbo, marwiriro anoita munhu kuti awane chinhu zvese zvinotaridzwa naMrongazuva. Mrongazuva anoita kuti vanhu vanatso shanda, uyeshandiro avo anoratidzwa naMrongazuva futi. Makudziro nekuzvitakura kunoita munhu, nezvese zvebonde zvinotaridzwa naMrongazuva. Ndoosaka Mrongazuva achinzi chindeya cheShungu.
Muruambanyeredzi anotonga nyenyedzi kana chiratidzo chinonzi Mseve kana Sajiterisi (Sagittarius). Pamusoro pezvo anomirira tariro, kuvimba nekukura kwemunhu. Inoratidza kuti munhu anowana mufaro ne chirongwa chohupenyu sei, uyezve anotaridza kuti ndepapi muhupenyu hwemunhu pavano vana rombo rakanaka. Zvakadaro, Vheneke anotaridza kufunda kwemunhu, mafungiro makuru, kunamata, uchenjeri nenjere dzemunhu. Kubudirira newana kwemunhu, kufamba nyika, uye Vheneke mutongi. Anoratidza hupfumi futi.
Muruambanyeredzi anotonga nyenyedzi kana ratidzo rinonzi Mbudzi kana Kapurikoni (Capricorn). Pamusoro pezvo anomirira chirango, kudzorwa / kurambidzwa muhupenyu, mutemo uye anoreva chokwadi. Inomirira zvipingamupinyi futi nebvuvano (ma-responsibilities) dzemunhu, maitiro avanoita zvinhu zvakakosha. Chiremera anotaridza mabatiriro anoita munhu zvinhu zvakokasha futi. Chiremera mufundisi (kana mudzidzisi) uye anomirira vaye kana zvinhu zvine simba kwatiri kana zvakakudzwa.
Neputoni muruambanyeredzi anotonga nyenyedzo kana ratidzo rinonzi Hove kana Paishisi (Pisces). Neputoni anomirira ndoto nengano muhunhu hwedu (nyangwe muhupenyu hwedu). Pamusoro pezvo anomirira zviroto, manzwiro (kana intuition) nefungidziro dzedu (kana imagination). Uyezve, inomirira zviroto zvemunhu kuzvinyepera (delusions) kwemunhu - nepavane unyanzvi hwekusika. Mafungiro asiri mubhokisi uye mafungiro asina kudzorwa. Nhetembo, mhanzi, nekutamba zvese zvinhu zvechisiko zvinoratidzwa naNeputoni, uye kuzarirwa nemanzwiro.
Mazita eZvindeya muChiBantuEdit
↑ 12.0 12.1 Astrology.com, h.z, 'Nyamatsatse: Chindeya cheKutaurirana' Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Chindeya&oldid=86988"
Last edited on 24 Chikumi 2021, at 09:55
This page was last edited on 24 Chikumi 2021, at 09:55.